ဘယ်လိုချက်ချင်းအားလုံးပြတင်းပေါက် MINIMIZE သလော - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
အဆိုပါ Windows operating system အားလုံးပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်အထူး function ကိုဝှက်ရှိပါတယ်, လမ်းဖြင့်, အားလုံးမဟုတ်သည့်သတိပြုမိကြသည်။ တဦးတည်းမိတျဆှေတစျဦးတို့ကတဦးတည်းပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်များစွာခေါက်အဖြစ်မကြာသေးမီကသူသည်သက်သေဖြစ်ခဲ့သည် ...
သင်သည်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်း, တစ်ပြိုင်နက်သငျသညျပွင့်လင်းသော e-mail ကိုအစီအစဉ် (သင်သင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်ရှာဖွေနေသည့်အတွက်) မျိုးစုံ tabs များနှင့်အတူ browser ကိုပဲသင်ဂီတနှင့်အတူကစားသမား play နောက်ခံခံစားရန်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်ဆိုပါစို့။ ယခုမှာရုတ်တရက်အပေါငျးတို့သသင် Desktop ပေါ်မှာဘယ်ဖိုင်မဆိုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့တပ်မက်လိုချင်သောအဖိုင်ကိုရရှိသမျှကိုပြတင်းပေါက်လှိမ့်ဖို့အလှည့်ယူရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်ကြာ? ရှည်လျားသော!
Windows XP မှာပြတင်းပေါက်လှိမ့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အရာအားလုံးအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ဂီတကစားသမားဖိုင်များ, Internet Explorer နှင့် windows ကို minimize ရန်ဖြတ်လမ်း: သင်နောက်တစ်နေ့မှာ "Start ကို" ခလုတ်ကိုမှမဆို settings တွေကိုမပြောင်းခဲ့ပါဘူးလျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်, သငျသညျသုံး icon များရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာတွင်က (အနီအတွက်ဝိုင်း) တူတယျ။
အဲဒါကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းပြီးနောက် - အားလုံးပြတင်းပေါက်ခေါက်သင့်တယ်နှငျ့သငျ desktop ပေါ်မှာကြည့်ရှုပါ။
စကားမစပ်! တစ်ခါတစ်ရံဒီ feature သင့်ကွန်ပျူတာကို "တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်လာသည်။ " စေနိုင်သည် function ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့နှင့် 5-10 စက္ကန့်အကြာတွင်နိုင်ပါတယ်ခေါက်သူ့ကိုအချိန်ပေးပါ။ သင့်ရဲ့ဘုံဘိုင်ပြီးနောက်။
ထို့အပြင်အချို့ဂိမ်းသင်သည်သင်၏ဝင်းဒိုးကိုလှိမ့်ချလိုက်ပါစေပါဘူး။ "ALT + TAB": ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သော့ကိုပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။
Windows7 / 8 မှာခေါက်ပြတင်းပေါက်
အဲဒီ operating systems များတွင်ခေါက်အလားတူလမ်းကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သာအိုင်ကွန်လာမယ့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်များ၏ Display ကိုရန်ညာဘက်အောက်ခြေမှာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောနေရာတစ်ခုတွင်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Windows7တွင်ကြည့်ဘယ်လိုဖွင့်:
ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်ကို Windows 8 မှာ, တူညီတဲ့အရပျ၌တည်ရှိသော button ကို minimize ။
အားလုံးပြတင်းပေါက် minimize ရန်နောက်ထပ်စွယ်စုံလမ်းရှိပါတယ် - ထိုဖြတ်လမ်းအပေါ် "ဟုဦးဝင်း + D နဲ့" ကိုနှိပ်ပါ - အားလုံးပြတင်းပေါက်နောက်တဖန်တက်လှိမ့်ကြသည်!
စကားမစပ်, သငျသညျသူတို့အရာအတွက်တူညီနိုင်ရန်အတွက်အားလုံးပြတင်းပေါက်ဖွင့်ဖို့အတူတူ button ကိုနှိပ်လျှင်။ အလွန်အဆင်ပြေ!